अपाङ्गको नाममा भित्रीएको डलरमा एनजिओ र आइएनजिओको रजाँई,सेमिनार र गोष्ठीको नाममा आधा रकम होटल र क्याफेमा स्वाहा | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← सरकारी निर्लज्जताको पराकाष्ट ,जिवन धान्नकै निम्ती अपाङ्ग महिलाहरु यौन पेसामा
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा अपाङ्गको नाममा आएको रकममा हिनामिना भएको ’boutमा नलेख्न पत्रकारलाई धम्की →
अपाङ्गको नाममा भित्रीएको डलरमा एनजिओ र आइएनजिओको रजाँई,सेमिनार र गोष्ठीको नाममा आधा रकम होटल र क्याफेमा स्वाहा
डिसेम्बर ३ अर्थात अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस संसार भर मनाइदै छ । नेपालमा पनि बिबिध कार्यक्रमका बिच यो दिवस मनाउने तैयारी गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस नजिकै आइपुग्दा एनजिओ र आइएन्जीओ हरुको गतिबिधीहरु पनि तिब्र भइरहेका छन् ।
नेपालका होटल र क्याफेहरुमा दैनिक रुपमा अपाङ्गताको नाम सेमिनार र गोष्ठी भइरहेका छन् तर बास्तवीक अपाङ्गलाई यो दिवस र भित्रीएका बिदेशी डलरले छुन सकिरहेको छैन् । रत्नपार्कमा एक जोर शिर ढाक्ने कपडा नभएर अठ्याँग्रीएर मागिरहेका ति वास्तवीक अपाङ्ग कागलाई बेलपाक्यो हर्षन बिष्मत जस्तो भएको छ ।
एउटा मध्यम स्तरको होटलमा सामान्य ५० जनाको कार्यक्रम गर्दा पनि ७०÷८० हजार रुपैँया खर्च हुने गर्दछ । तर ७०÷८० रुपैयाँ नभएर भोक भोकै बस्ने कयौ अपाङ्गहरु नेपालमा छन् । आफुले लगाएको एक जोर लुगाले शरीर ढाक्न नसक्ने अपाङ्ग छन् । प्रयोग गर्ने ह्विचेयर र नक्कली खुट्टा बनाउन पैसा नभएका अपाङ्गहरु यहाँ छन् । बषौ देखि परिवारले कोठामा थुनेर तथा डोरीले बाँधेर बसेका अपाङ्ग छन् यहाँ । तर अपाङ्गको नाममा भित्रीएको हरिया डलर सिमित अपाङ्गका नाममा सञ्चालीत एनजीओ हरुको कमाइखाने पेसा बनेको छ । देश बिदेश घुमेर मनोरञ्जन गर्ने माध्यम बनेको छ । अग्निबाँणले आगामी दिनमा अपाङ्गको नाममा कमाउने एनजीओ तथा करोडौ रुपयाँ होटलमा सिध्याएर अपाङ्गको नाम बेच्नेहरुको पर्दाफाँस गदै जाने छौ ।
अपाङ्गको नाममा काम गर्ने एनजिओहरुले आम्दानी र खर्चको बिबरण पारदर्शी रुपमा राख्नु पर्ने हुन्छ । यदी राज्यले अव त्यसको निगरानी गर्न सक्दैन भने नागरीक स्तरबाट आवाज उठाउनु जरुरी हुने छ । अपाङ्गकुनै व्यक्ति र संस्थाका ठेक्काका व्यक्तिहरु होइनन् । उनिहरुको पनि आफनै अस्थीत्व रहेको छ ।
रत्नपार्कमा कला देखाए माग्ने अपाङ्ग र डोरीले बाँधेर कोठा भित्र जिवन बिताउने अपाङ्गको निम्ती एनजिओ र आइएन जिओ को होटेलका सेमिनार र गोष्ठीले के फाइदा पुग्छ ? अपाङ्गको नाममा भित्रीएको आधा रकम होटलमा सेमिनार र गोष्ठीमा सकीने गर्दछ त्यो के का निम्ती हो ? होटलका सेमिनार र गोष्ठीको साँटो एउटा सामान्य हल वा कुनै कोठामा बसेर मिटीङ गरेर बचेको पैसा अपाङ्गको निम्ती किन खर्च गर्न सकिन्न ? होटल र क्याफेमा सेमिनार गरेर उनिहरुले कस्को हितको निम्ती पैसा खर्च गरीरहेका छन् ? अव अपाङ्गता भएका साथीहरु पनि एक जुट भएर त्यस्ता एनजीओ र आइएजजीओ माथी कडा प्रतिबाद गर्नुै पर्ने हुन्छ । सिमीत अपाङ्गहरुको ठेकेदार ठान्नेहरुले बिदेशी दाताहरुमाझ पुगेर करोडौ रुपैयाँ यहाँ भित्र्याई रहेका छन् त्यसको कुनै हिसाव किताब छैन । आएको पैसाले सेमिनार गोष्ठी र आफनै पोल्टो भर्ने काम गरेका छन् । बषौ देखि खुलेका ति एनजीओ र आइएनजिओ ले अपाङ्गका निम्ती हित हुने के कति काम गरे ? हाम्रो प्रश्न उनिहरुलाई छाडदै अग्निबाँणले आगामी अंकबाट त्यस्ता डलर कुम्ल्याउने संस्थाहरुको पर्दाफाँस गदै जाने छ । प्रतिक्षा गदै जानु होला ।